स्थानीय तहसँग छलफल नगरीकन हचुवामा पठाएको सशर्त बजेट कार्यान्वयन हुन कठिन : अध्यक्ष पाण्डे - sailungonline
२२ जेष्ठ २०७८, शनिबार २२:२० । काठमाडाैँ
कोभिड-१९ बारेमा के कस्तो कार्यक्रम अघि सारेका छन्, नुवाकोट जिल्लाका तादी गाउँपालिकाले ? तिनै विषयमा गाउँपालिका अध्यक्ष नारायणप्रसाद पाण्डेसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी ।
कोभिड–१९ महामारीको बेला गाउँपालिकाले कस्तो खालको प्रबन्ध गरेको छ ?
तादी गाउँपालिका (गापा) ले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा दोस्रो लहरको कोरोना बढेसँगै स्वास्थ्यका मापदण्डहरू अपनाएका छन् । कोरोना समुदायस्तरमा उल्लेख्य बढेको थियो । शङ्कास्पदलाई एन्टिजेनमार्फत परीक्षण गरिरहेका छौँ । त्यसको प्रभावले घट्दै गइरहेको पनि छ । खरानीटार अस्पतालमा आइसोलेसन बनाएका छौँ । अहिले आइसोलेसनमा भएकाहरूको स्वास्थ्य पनि सामान्य नै छ । पालिकाले एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राखेका छौँ जसले सङ्क्रमितहरू त्रिशूली अस्पताल र काठमाडौँ लैजान सकिन्छ ।
गापाभित्रका सङ्क्रमितहरूले ज्यान गुमाएका छन् ?
मैले पाएको सूचना अनुसार आजसम्म ३ जनाले ज्यान गुमाएको छ। तर काठमाडौँमा रहेका अस्पतालको भेन्टिलेटरमा भएकाहरूको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार आएको जानकारी छ ।
गत वर्षको बजेटमा एम्बुलेन्स खरिद गर्न बजेट छुट्याएको रहेछ त्यो खरिद भयो ?
दुर्भाग्यवश हामीले सूचना पनि प्रकाशित गर्‍यौँ तर कोही पनि टेन्डर प्रक्रियामा आएनन् । त्यसैले अहिलेचाहिँ अर्कै तरिकाबाट खरिद प्रक्रियामा अगाडी बढाइरहेका छौँ। त्यो पनि कोरोना बन्दले प्रभावित पारेको छ । अब केही समय बाँकी छ अझै खरिदकै प्रक्रियामा छन् । त्यो हुन्छ ।गत वर्षबाट सुरु भएको कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बजेट नै बनाएको छ ।
पास्नी, छेवर, विवाह र घेवा कर्मकाण्ड अनि काठमाडौँ आवतजावत गर्नाले कोरोना समुदायस्तरमा फैलिएको मेरो ठम्याइ हो ।
कोभिडबाट सिर्जित हुन सक्ने सङ्कट व्यवस्थापनमा कत्तिको सफल भयो ?
हामी यसमा बिलकुल सफल भएका छौँ । हामीले यसमा मातृ र बाल मृत्युदर घटाएका छौँ । छ वटै वडाका लागि दुइटा बर्थिङ सेन्टर छ । खरानीटार अस्पतालमा आधुनिक बर्थिङ सेन्टर छ । गर्भवतीका लागि अस्पतालसम्म लैजान निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले दिएको सुत्केरी पोषण भत्तामा थप गाउँपालिकाबाट २ हजार दिएका छौँ । ज्येष्ठ नागरिक लगायतमा कोभिडको शङ्का लागेमा परीक्षण र निःशुल्क एम्बुलेन्स सुविधा गरिएको छ ।
त्यस्तै समुदायस्तरमा स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधि साथीहरू र म आफैँ गएर आत्मबल बढाउने काम गरिँदै आएको छ । त्यसले सकारात्मक सोचमा बढवा दिएका छन् ।
दोस्रो भेरियन्टको कोरोना महामारी बढेसँगै तपाईँको पालिकाले गरेका तयारीले यसमा कत्तिको सहज भइरहेको छ त ?
भारतमा दोस्रो लहर आएसँगै त्यहाँबाट आउने जनतालाई सरकारले सावधानी अपनाउन सकेमा यो अवस्था नै आउने थिएन । तैपनि हामीले आफ्नो हैसियतबाट गाउँमा आएकालाई परीक्षण गर्ने शङ्कास्पद व्यक्तिलाई घरमै राख्ने गरिरहेका छौँ । जनता पनि सचेत हुनुपर्ने थियो । त्यो देखिएन । ठ्याक्कै भन्नुपर्दा पास्नी,छेवर,विवाह र घेवा कर्मकाण्ड अनि काठमाडौँ आवतजावत गर्नाले कोरोना समुदायस्तरमा फैलिएको मेरो ठम्याइ हो । अहिले हाम्रो जनप्रतिनिधि‚ स्वास्थ्यकर्मी लगायत गापाको क्षमताले त्यो सबै बन्द गरिएको छ । यसर्थ अहिले कम हुँदै गएको छ ।
गत वैशाखबाट गाउँपालिकाले सूचना जारी गरी अति आवश्यक काम कारबाहीबाहेक अरू सेवा बन्द गरिएको थियो । त्यो अहिले खुला छ कि झन् कडाइ गरेको छ ?
त्यो झन् कडाइ गरेको छ अहिले । अति आवश्यकबाहेक सबै सेवा बन्द नै छ । गाउँपालिकाभित्रका विकास निर्माणमा सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर सरलीकरण गरेका छौँ । किनकि आर्थिक वर्षको अन्ततिर पनि भएकाले यसलाई प्राथमिकता दिएका हुन् । अरू त बन्द नै छ । जुन चेनब्रेक गर्दाखेरि कोभिडलाई नियन्त्रण लिन सकिन्छ भन्ने सूत्र छ यसलाई पूर्ण पालना गरी अगाडि बढिरहेका छौँ ।
नजिकको सरकार नै स्थानीय सरकार हो । तादी यसमा अग्रसर भनेर जनताले अनुभव गर्न पाएका छन् ?
यसमा चाहिँ जनताको समस्याको सम्बोधन आफ्नै टोल वडाबाट भइरहेका छन् । अति आवश्यक सेवा भौतिक पूर्वाधार लगायतका कामहरू वडाबाटै सम्पन्न भएपछि त स्थानीय सरकारको महसुस गर्न पाएका छन् । हामीले जनतालाई राहत पुग्ने नीति तथा कार्यक्रमहरू पनि ल्याएका छौँ। जनताको समस्यामा स्थानीय सरकार अगाडी उभिने हुँदा त्यो महसुस गरेका छन् भन्ने मलाई लाग्छ ।
सङ्घीयता आएपछि पालिकाहरूबाट नै सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न एकरदुई वटा अपवादबाहेक हरेक समस्यामा स्थानीय सरकार अग्रसर छन्।
यो हिसाबले २०७८-७९ को बजेटमा कतिको उत्साहित पाउनु भएको छ ?
उत्साहजनक नै छ । स्थानीय सरकारमा बजेट बढेर आएको छ । कृषिमा पनि ठुलो मात्रामा बढाएर आएको जानकारी प्राप्त छ । उत्साह भए पनि अलि वितरणमुखी चाहिँ भएको हो कि भन्ने लाग्छ । सरकारले गरेका कामहरू कार्यान्वयनको पक्षमा सफल हुनेमा हामीले विश्वास लिएका छौँ । यसको कार्यान्वयन पक्षको हिस्सेदार भनेको हामी नै हौँ । तर म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने‚ स्थानीय आवश्यकता के हो ? कुन चाहिँ कुराको आवश्यकता हो ? स्थानीयसँग छलफल र अध्ययन नै नगरीकन केन्द्रबाट सशर्त अनुदान पठाइदिएको अवस्था छ ।सिधै केन्द्रमा नै कार्यविधिबाट पास गरेको छ । त्यसले गर्दा कार्यान्वयनको पक्षमा धेरै गाह्रो भइरहेको छ । त्यस्तै छलफल नै नगरी बजेट पठाएपछि त्यो अन्तमा फ्रिज भएर जाने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसैले यस विषयमा अध्ययन हुन जरुरी छ । जनशक्ति पठाउने विषयमा पनि छलफल नगरी पठाएपछि गाह्रो भइरहेको छ ।
(रेडियो नेपालका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत अमरध्वज लामाले रूपान्तरण कार्यक्रममा गरेका कुराकानी)
१. तरलता अभावसँगै सेयर बजारमा पहिरो
२. जनसम्पर्क साउदीको दुई क्षेत्रीय अधिवेशन सम्पन्न
३. युवा सङ्घ दोलखाको १५१ सदस्य गठन (नामसहित)
४. विश्व र तबु वाईबाको `मनको डेरा´ सार्वजनिक
५. सितगंगा समाजद्वारा इलाका प्रहरी कार्यालयलाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग
६. काँग्रेस जिल्ला सभापतिमा निमा ग्याल्जेनको उम्मेदवारी किन ?